. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: လွမ်း
မိုးခါးတို့ စာရေးမရပါ .. ရေးချင်စိတ်ရှိရက်နဲ့ ရေးစရာလည်း စဉ်းစားမိရက်နဲ့ကို မရေးဖြစ်သေးတာပါ .. ဒီတော့ ခုလောလောလတ်လတ် ပူပူနွေးနွေးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်နဲ့ပဲ ဆားချက် ငံပြာရည်ကြို ငပိထောင်းပါ့မယ် .. :P
ကျမ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာဝါသနာပါလို့ပါမှန်း မသိပါ .. စာအုပ်မြင်ရင် ဖတ်ချင်စိတ်လည်းရှိရင် စာအုပ်ဖတ်ပါတယ် .. သီချင်းစဖွင့်ဖြစ်တယ်ဆို သီချင်းဆက်ပြီး နားထောင်ပါတော့တယ် .. ရုပ်ရှင်တော့ သိပ်မစွဲဘူး .. ဒါပေမယ့် ကြုံသလို စိတ်ကူးပေါက်သလိုတော့ ကြည့်တာပါပဲ .. အခြားအခြားသော စိတ်ကူးပေါက်ရာများကိုလည်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့်မို့ ထင်ပါရဲ့ အစ်မတွေက ပြောတယ် .. နင် စိတ်မမှန်ဘူးတဲ့ .. မငြင်းမိပါ .. လက်ခံပါတယ် .. ကိုယ့်အခြေအနေလည်း ကိုယ်သိပါတယ် .. ဒီတော့ နာလည်း မနာတော့ပါဘူး .. :P
ဟိုနေ့က ဖတ်လို့ပြီးသွားတာက တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရေးတဲ့ လွမ်း ဆိုတဲ့ ၀တ္တုပါ .. အချစ်ကြီး အမျက်ကြီး အမုန်းကြီးတဲ့ လွမ်း ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး တယောက် အကြောင်းပေါ့ ..
မိခင်မရှိတော့ပဲ ဖခင်ကြီးနဲ့ ညီမလေးနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနေတဲ့ လွမ်းရဲ့ဘဝထဲကို မရည်ရွယ်ပဲ ဒုက္ခတွေ သယ်လာမိခဲ့တာက ဒေါက်တာမင်းညို (ခေါ်) မောင်မောင်လွင် .. လွမ်းအသိထဲမှာက မောင်မောင်လွင်ဟာ သူ့အတွက် ဂြိုလ်ကောင် တယောက် .. ဒေါက်တာမင်းညိုကတော့ သူသိပ်ချစ်ရတဲ့ သူ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို အလင်းပြန်ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင် တယောက် ..
အမှန်တရားကို လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူတယောက်အတွက် အထင်လွဲမှုတွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံတွေ့ရတာပါပဲ .. စိတ်ထင်ရာ ဒေါသတကြီး တုန့်ပြန်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း နောင်တက ကပ်လျှက်ပါနေပါတယ် .. ဘယ်အရာကိုမှ အစွန်းမရောက်ပဲ မျှမျှတတ တွေးတတ်ဖို့ ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် .. မှားသွားခဲ့ရင်ရော ?.. ပြင်ခွင့်ရတဲ့အမှားဆို တော်ပါသေးတယ် .. ပြင်ခွင့်မရခဲ့ရင် ... ?
ဝတ္တုထဲမှာ လွမ်းကတော့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် အပြီးတော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး .. ဒါပေမယ့် အရင်အတိုင်း အကောင်းတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ..
လူတိုင်း အမှားနဲ့ မကင်းပါဘူး .. မှားတယ် .. မှားပြီးရင်းထပ်မှားတယ် .. အမှားတွေထဲကမှာ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်အောင် အမှားတွေ နည်းသထက် နည်းအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ် ..
ကျမရော .. ?????
ရေးသားသူ မိုးခါး at 8/20/2010 12:21:00 AM
အကြောင်းအရာခွဲ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ စာအုပ် review